Maka: izindleko ngokuchofoza ngakunye | Martech Zone
Maka: izindleko ngokuchofoza ngakunye
NgoMgqibelo, Juni 21, 2014 NgeSonto, ngoJuni 22, i-2014 Douglas Karr
Lapho ngiqala ukubuyekeza le infographic, nganginokungabaza ukuthi kunamamethrikhi amaningi kakhulu alahlekile… kepha umbhali wayecacile ukuthi ayegxile emikhankasweni yokukhangisa yedijithali hhayi isu eliphelele. Kunamanye amamethrikhi esiwabonayo isiyonke, njengenombolo yamagama asemqoka wokulinganisa nezinga elijwayelekile, amasheya ezenhlalo nokwabelana ngezwi… kepha umkhankaso uqobo unesiqalo esinqunyiwe futhi uyamisa ngakho-ke akuyona yonke imethrikhi esebenzayo
NgoLwesibili, Januwari 21, 2014 Douglas Karr
UPardot uhlanganise leli shidi lokukhwabanisa lemethrikhi ebelilokhu lenza imizuliswano. Izibalo zokumaketha zanamuhla zinamandla. Abakhangisi banokufinyelela kuzo zonke izinhlobo zamamethrikhi, kusukela ekubukweni kwamakhasi nezinombolo zabalandeli kuye ekuvezeni izibalo eziningi ezibandakanya ukuhola nokuthengisa. Ngokuvela obala okwandayo kwedatha yokumaketha, kulula ukubanjwa ngemininingwane - kaningi kunalokho - engathinti empeleni imali yakho engenayo. Abakhangisi badinga ukugxila kukho